Ndingabandisa njani abalandeli kwiPinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 218
Zonke iinethiwekhi zentlalo namhlanje zikwazile ukungena entliziyweni yomntu ngamnye ozama hlala isithuba kuzo. Oko kuthetha ukuba usuku ngalunye oludlulayo bazabalazela ngendlela eyahlukileyo kodwa evelisayo yokufumana isabelo kuphuhliso lwamaphupha abo kwinqanaba ledijithali.
Ngokwabo, iingcali zemidiya yoluntu zityhile uthotho lweengcebiso ezibalulekileyo ezijolise kubo bonke abasebenzisi abafuna ukuya phambili kwindiza yokunxibelelana. Ngale ngcebiso, kulula ukulandela imihla ngemihla kunye neempawu ezixhasa abantu abanomdla kuwe ekukhuleni.
Nangona kunjalo, esinye sezibonelelo zePinterest kukuba akukho sinyanzelo sokuba mkhulu kodwa, ngaphezu kwako konke, ukubonisa yonke imihla into ayenzayo umntu ukukholisa imeko yokunxibelelana. Ke ngezantsi ungabona zonke iingcebiso ukwandisa abalandeli ngexesha elifutshane.
Yintoni abalandeli bePinterest?
Nje ukuba wenze iakhawunti yakho kwiPinterest, uyakuqonda ukuba abalandeli yile mibutho iyimfuneko ukuze kuzalisekiswe ukusebenza kweqonga. Ukusuka apho unokufumana amakhulu wamathuba ekukhuleni konxibelelwano kodwa ufumane nabantu abathanda izinto ababelana ngezinto ozithandayo.
Ngapha koko, kunokwenzeka ukuba enkosi kubalandeli bePinterest kunokwenzeka ukugcina umgca we ukukhula kunye nokusebenzisana kwiimveliso ezithile esele zikho. Ngokuqinisekileyo zezona zinto zibalaseleyo zokudala amava amatsha.
Ukufikelela ngakumbi ngaphakathi kweqonga
Ukuba abalandeli bakho bavelisa unxibelelwano olufanelekileyo kunye nale nto uyenzayo, ke umbono olungileyo ukuba baqhubeke apho kodwa ngendlela yendalo. Kule meko, ukuba umntu uza kujonga iprofayili yakho, baya kuba nakho ukubona isizathu sokuba inani labalandeli bakho lisanda.
Ngeli xesha, incindi yokunxibelelana ivelisa iintshukumo ezithile zenethiwekhi yoluntu kwaye ke ukuqhubeka okungakumbi ngaphakathi kwenqwelomoya.
Ndilikhulisa njani inani lam labalandeli kwiPinterest?
Nje ukuba isizathu sokuba abalandeli bavele kwiPinterest siqondiwe, ke kunjalo umbono olungileyo wokuba izicwangciso zihambe Ukukhulisa abalandeli eqongeni. Ngokuqinisekileyo oku kunokwenzeka ukuba kunike ithuba kumathuba amatsha okwandisa ngaphakathi kweqonga ngokwalo nakwezinye iinethiwekhi zentlalo.
Ungayishiyi ibhodi yakho yePinterest ingenanto
Ukuvelisa umxholo oxabisekileyo kunye nomgangatho, abantu bayathanda ukubona inyani
Hlela iibhodi zakho rhoqo ngenyanga kwaye ungeze izimvo ezintsha
Sebenzisa i-SEO njengendlela yakho yokunceda engenakuphikwa
Ukusebenzisana nabalandeli bePinterest kunye nabasebenzisi ngumbono ogqwesileyo
Ukwenza la manyathelo angentla kuya kubonelela abantu ngokujonga ngokusondeleyo emsebenzini wakho, kodwa kwananjalo krwaqula ubuntu obungaphakathi kwinto ofuna ukuyiphumeza. Yonke into inokwenzeka ukuba yenziwe ngomzamo omkhulu kunye nomgangatho obonakalisa umsebenzi wakho ngaphakathi kwemiqathango.
1 Yintoni abalandeli bePinterest?
1.1 Ukufikelela ngakumbi ngaphakathi kweqonga
2 Ndilikhulisa njani inani lam labalandeli kwiPinterest?
Ndifuna ukuthumela imiyalezo ku-Instagram kwikhompyuter yam